Neny Tiako Fifaliako - Vokatra Vita malagasy, “afterwork”, kilalao maro isan-karazany entina hamalifaliana ireo reny
Publié mai 24, 2019 par Book News
Nisokatra omaly ny hetsika “Neny Tiako Fifaliako” izay karakarain’ny IKM. Vokatra vita malagasy, mpandraharaha vao misandratra, kilalao maro isan-karazany, “afterwork” sy “happy hour”, ireo no atolotry ny IKM mandritra ny hetsika, sady ahitana fanomezana maro ho an?ireo reny no ahafahana ihany koa manandratra ny Vita malagasy.
Neny Tiako Fifaliako.
Omen-danja ny Vita malagasy
Tonga avy lavitra hampiranty ny koba sy saosisy ireto mpandraharaha avy any Talata Volonondry ireto. cc : Book News Madagascar]
Nanomboka omaly ny hetsika « Neny Tiako Fifaliako » andiany fahenina zay tontosaina eny amin’ny Ivontoeran’ny Kolontsaina Malagasy na IKM Antsahavola. Mandritra ny 3 andro dia hampirantiana eny an-toerana ny Vita malagasy, toy ny sakafo, asa tanana, fitafy sy firavaka, izay vokatry ny asan’ireo orinasa sy mpandraharaha malagasy ihany koa.
Tanjon’ny hetsika ny fanomezan-danja ny Vita malagasy sy ny fandresena lahatra ny olona mba hanome fanomezana Vita malagasy an’i Neny amin’izao an-katoky ny Fetin’ny reny izao.
Manomboka amin’ny 500 Ariary dia efa afaka manjifa ny vokatra ireo mpitsidika, araka ny fanazavan’i Landy Rakoto, tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ny IKM.
Landy Rakoto, tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ny IKM. cc : Book News Madagascar
« Afterwork »
Anisan’ny mampiavaka ity andiany fahenina ity ny « afterwork » izay atao androany hariva amin’ny 6 ka hatramin’ny 9 ora alina ao amin’ny IKM Antsahavola ihany. Izany no natao dia mba hahafahan’ireo olona tsy afaka mitsidika ny varotra fampirantiana mandritra ny tontolo andro mba hitsidika izany ny hariva.
Hitohy araka izany ny varotra, saingy hisy ihany koa ny filatroana miaraka amin’ny Bika Gasy sy ny « beatbox » iarahana amin’ny mpanakanto Dobe. Hisy ihany koa ny “happy hour”. Ankoatra izay dia hisy kilalao ahazoana loka « surprise« .
Mpitsidika 1 000
Nosokafana omaly tao amin’ny IKM Antsahavola ny hetsika “Neny Tiako Fifaliako”. cc : Book News Madagascar
Nahazo mpitsidika 800 ny IKM tamin’ny andiany fahadimy. Mpitsidika 1 000 kosa no kendrena amin’ity andiany fahenina ity.